သူတို့ပြောတဲ့ အချစ်အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » သူတို့ပြောတဲ့ အချစ်အကြောင်း
- Moe Z
Posted by Moe Z on Sep 25, 2011 in Critic, Cultures, Think Different | 14 comments
မနေ့က Boss ကစီစဉ်ပေးလို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ညစာစားပွဲတစ်ခုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မိုးစက်တို့ဝိုင်းမှာ အားလုံးက လက်မထပ်ရသေးသူ(single)တွေချည်းပဲစုမိကြတယ် (ကြော်ငြာဝင်တာမဟုတ်ပါ ဆွေးနွေးကြတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ သက်ဆိုင်လို့ပါ)။အမေရိကန်နိုင်ငံသား အမျိုးသမီး ၁ယောက်၊ အမျိုးသား၂ယောက်၊ ဖိလစ်ပိုင်သူ ၂ယောက်၊ ပြင်သစ်သူ ၁ယောက်၊ မိုးစက်နဲ့ နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အားလုံး ၈ယောက်ပေါ့။ မိုးစက်တို့အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာ၂နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ အားလုံးရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ တစ်ယောက်အကြောင်းလဲ တစ်ယောက်သိနေကြပါပြီ။ အလုပ်ချိန်မှာစကားသိပ်မပြောဖြစ်ကြတော့ အခွင့်အရေးရတုန်း စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ ပြောကြတဲ့စကားတွေ ရေပက်မ၀င်ဘူး။
ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ နောက်ဆုံး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ရောက်သွားတယ်။ အမေရိကန်သူကစပြောတာ different culture of love ကို ဘယ်လိုမြင်သလဲတဲ့ (သူကမြန်မာ tour guide တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတယ် )။ အရင်ဆုံး ဖိလစ်ပိုင်သူ တစ်ယောက်က စဖြေတယ်။ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဘာသာလည်းမတူ လူမျိုးလည်းမတူရင် အတွေးအခေါ်ရော အယူအဆပါကွဲပြားနိုင်လို့ လက်ထပ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါတဲ့။ နောက်တစ်ယောက်တော့ သူတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးတော့ လောလောဆယ်မပြောတတ်ဘူးတဲ့။ ဒီအုပ်စုထဲမှာ မိုးစက်ကလွဲရင်အားလုံးက ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေပါ။ အမေရိကန်သားတစ်ယောက်ကတော့ ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကစစ်မှန်မယ်ဆိုရင်၊ ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန်နားလည်မှုပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေမှာပါတဲ့ (သူကဒီအုပ်စုမှာအငယ်ဆုံး ၂၂နှစ်ပဲရှိသေးတယ်)။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လူမျိုးမတူရင်တောင် Jesus Christ ကိုယုံကြည်မယ် သူ့ကိုလည်းတကယ်ချစ်မယ် သူတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းလိုက်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားမယ်တဲ့ (မိုးစက်အမြင်မှာတော့ နဲနဲအတ္တကြီးသလိုပဲ သူ့ရဲ့မိန်းကလေးဘက်ကကြည့်ရင် )။ နောက်တစ်ယောက်က အချစ်ဆိုတာဖန်တီးယူလို့မရသလို ဘယ်လိုလူမျိုးကို ချစ်မိမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး၊ အဲဒီတော့ ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူတဲ့သူကိုချစ်မိရင် အဲဒီအချစ်တွေရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူတော့ဖြစ်လို့ရတယ် လက်ထပ်ဖို့တော့ မကြိုးစားဘူးတဲ့။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာ ညှိရမယ့်ပြသနာတွေအရမ်းများလိမ့်မယ်တဲ့။
နောက်ဆုံး ပြင်သစ်သူက၀င်ပြောတယ်။ why not… we all are human beings, forget about your nationality and religion တဲ့ (သူကဘာသာမဲ့ တစ်ယောက်လေ)…………။
About Moe Z
has written 32 post in this Website..
Biography is nothing special but I'm special
View all posts by Moe Z →
အကယ်၍ မိုးစက်လည်း ကြောင်တကောင်ကို ဘဝအဖေါ်အဖြစ် လက်တွဲရဲတယ်ဆိုရင် ကြောင်ကြီးရင်ခုန် နေပါရစေ။ မိုးစက်အတွက် ကိုကြောင် ကြွက်ခုတ်ကျွေးပါ့မယ်။ ကြောင်ကြီးကတော့ ငါးကြော်စားရရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
ကြုံရင်ကြုံသလို ပုစွန်ခြောက်နဲ့ cat food တစ်လှည့်ဆီ နှစ်ပါးသွားနေရတယ်
“ကြောင်ကြီးကတော့ ငါးကြော်စားရရင် ကျေနပ်ပါပြီ ” တဲ့
နှစ်ယောက် ဝေမျှ စားသလို များလား…
We know,We are the World. But,I’ve gotaalso problem because we’vealow living standard.
တကယ်အိမ်ထောင်ပြုလို့ လူမျိုးဘာသာမတူဘူးဆိုရင် စဉ်းစာရမဲ့အချက်တွေကတော့ –
တကယ်ချစ်ရဲ့လား။ (ခုချိန်မှာတော့ တကယ်ချစ်တယ်ပဲပြောကြပါလိမ့်မယ်။)
ကိုယ်သူ့ကို ဘယ်လောက်အထိ သည်းခံလိုက်လျှောပေးနိုင်မလဲ။
သူကရော အပေးအယူ အလျှော့အတင်းနဲ့ ညှိလို့ရမဲ့သူလား ။သဘောထား တင်းမာသူလား။
အဲ… နောက်ဆုံးတော့ ဗေဒင်ဆရာဆီသာ သွားမေးကြည့်ပေတော့။
ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောရရင်… … အချစ်မှာ အချစ်ပဲ လိုပါတယ် ….လက်ထပ်တာဆိုရင်တော့…… အားလုံးလိုပါတယ်…… အချစ်တခုထဲနဲ့ အရာရာမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး..
ွှအင်း…. အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေကြလို့ အား လုံး Single ဖြစ်နေကြတာ။
တူတာဘဲယူယူ မတူတာဘဲယူယူ ကွဲတဲ့သူလည်းကွဲ မြဲတဲ့သူလည်းမြဲ ပါဘဲ။
အချစ် = အချစ်ပေါ့
ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့
မပါမဖြစ်က အချစ် ၊ ပြီးတော့ နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်း ပြီးရင်တော့
တစ်ခြား တစ်ခြားသော မမြင်နိုင်သော အရာတွေတော်တော်များများ ပါဝင်နေပါတယ် ။
ကျွန်မကတော့ အချစ်ကို ဒီလိုပဲ လက်ခံ နားလည်ထားပါတယ် … ။
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် .. ဘာသာ တူတူမတူ တူ .. အသက်ရွယ် တူတူ မတူတူ … လူမျိုး တူတူမတူတူ … ကိုယ်ကလည်း သူ့အပေါ် နားလည် နိုင်ရမယ် …သူကလည်း ကိုယ့် အပေါ် နားလည် သည်းခံနိုင်ရမယ် … မလျှော့မတင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးရှိပြီး သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားတာမျိုးပါ …. ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အပြန်လှန် မေတ္တာ သက်ဝင်ပြီး ဘေးက ဘယ်ပယောဂကိုမှ စိတ်မယိုင်ပဲ ယုံကြည်ရာ လုပ်ဆောင်တတ်တာမျိုးပါပဲ …
ဒီ post ထဲမှာပါတဲ့ ပြင်သစ်သူက သူနဲ့ on line မှာတွေ့ပြီးချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသား လူမည်းတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ မနေ့ညနေကဘဲ ရန်ကုန်မြို့မှထွက်ခွာသွားပါကြောင်း ;)
သည်ပို့စ်မှာ မိုးဇိလေးကရော ဘယ်လို လက်ခံထားပါသလဲဆိုတာ ..
(သင်္ဘောသီးဒွေ စုန်းထီးတွေ လာတော့မယ် …..သိနေဒလယ် …)
မိုးဇိလည်း ပြော… ပြ… ပြော…
ကအင်ကြီးပြောသလို အမြင်လေးကို ပြောပါဦး..
မိုးဇိ လက်ခံလိုက်… လက်ခံလိုက်..
မပါလို့ မေးရတာပေါ့ ဆောင်းပါးရှင် မိုးဇိ ဂလေးရယ်
ပေါက် ပေ လူး ဂီ အီးတီ စည်
ချော ဖော မှောင် ဘီ သဂျိုင်ခီ
လူစွမ်းကောင်း အားလုံးက သိချင်နေဂျရှာမှာ
Shar Thet Man on ## ရွှေကျင်မြို့မှ မီးမျှောပွဲ ##
Shar Thet Man on မောင်ရိုးနှင့် ပရီမီယံဖါးပြုတ်ဝီစကီ
Shar Thet Man on Scrub နဲ့ rub ကြမယ် – DIY Home Spa (2)
Shar Thet Man on Learning English Grammar- Professor Myo Kyaw Myint
ayesad89 on ပေသီးများ
ayesad89 on ဈေးသည်နဲ့…ဆေးသည်
kai on အမာရွတ်ဆိုတာ ထွေးထုတ်ပစ်ဖို့ မလွယ်ဘူး
မောင်ရိုး on တီတီ တာတာ ဇီဇီ ဆာဆာ အပိုင်း (၅)
Thint Aye Yeik on ကဗျာစာအုပ်ပါးပါးအတွက် ဝေဖန်ခံစားမှုပါးပါး
Thint Aye Yeik on အမာရွတ်ဆိုတာ ထွေးထုတ်ပစ်ဖို့ မလွယ်ဘူး
kai on အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – Bold News စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
manawphyulay on ပေါက်ပန်းလေးဆယ် စကားဝိုင်း – ၂ (ဗုံးခွဲခြင်း)
Shar Thet Man (64896 Kyats )
Foreign Resident (60135 Kyats )